दलान नेपाल : अपराध र भ्रष्टाचारवाट मुक्त हुनुपर्छ मधेश - केदारनन्दन चौधरी
अपराध र भ्रष्टाचारवाट मुक्त हुनुपर्छ मधेश - केदारनन्दन चौधरी
केदारनन्दन चौधरी, सभासद -तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी
६ महिना भैसक्यो नेपालमा आएर खुल्ला राजनिती गर्न थालेको, कस्तो छ यो राजनिती अवद्यीको अनुभव ?
- सभासद भएको ६ महिना भयो । म त्यो भन्दा पहिला पनि नेपालको राजनिती प्रति धेरै चासो राख्ने मान्छे । र खासगरी यो ६ महिनाको सक्रिय राजनितीमा म धेरै कुरा बुभ्mन मौका पाएको छू । र मधेशको सन्दर्भमा मेरो विचारमा, मधेशलाई अपराध र भ्रष्टाचारवाट मुक्त गराउनु पर्छ । त्यसपछि मधेशमा शिक्षा र विकास माथी जोड दिनु पर्छ ।
अब त तपाई आफै मधेशी जनताको प्रतिनिधी, यस सम्बन्धमा त काम गर्नुहुन्छ नि ?
- म समाजसेवा पृष्टभुमिको मान्छे । मेरो पहिला देखिको छवि नै समाजसेवा हो । त्यसैले मेरो प्राथमिकतामा विकास नै हुन्छ । र स्वभावतह अहिले संविधान वनिरहेका कारण म त्यसमा पनि पार्टीको परिधीमा बसेर मधेशी जनताको पक्षमा सक्दो काम गर्छु ।
अली प्रसंग बदल्लौ है, तपाई सभासद भएपछि मिडियामा खुवै चर्चा भाको थियो, तपाई भारतमा निर्वाचन पराजय भएको मान्छे भनेर ?
- यसको वारेमा मेरो पार्टी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले बोलीसकेको छ, त्यसकारण म यसको वारेमा कुनै टिप्पणी गर्दिन । तर यती कुरा भन्छू मिडियावाजी चाही प्रायोजित थियो ।
तपाई भारतमा राम्रै व्यापार गरेर बसेको एउटा नेपाली किन याहा फर्केर राजनितीमा होमिनु भयो ?
- हो, म दिल्लीमा राम्रै व्यपार गरेर बसेको मान्छे र त्यहा मेरो समाजसेवाको पनि राम्रै छवि थियो । नेपाल नफर्कदा पनि केही फरक मलाई पर्न वाला थिएन । तर सर्लाही र मेरो गाउ ईलाकासंग मेरो जुन लगाव थियो त्यसले मलाई अन्नतह याहा राजनिती गर्न फर्काएको हो ।
अब त बाकी जीवन नेपालमै वित्ने होला नि ?
- हो , अब नेपाल मै राजनिती र समाजसेवा गर्छु ।